Ciidamada Amniga MuqdiSho Oo Howlgal Ku SOo Qabtay Maandooriye Iyo Raggii Ka Ganacsanayey+Sawiro
Friday June, 22 2018 - 04:28:34
Friday October 13, 2017 - 14:16:00 in by salman abdi
Ciidamada Ammaanka ee maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaas waxay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ku howlanaa sameyntiisa.
Ciidamada Ammaanka ee maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaas waxay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya iyo dadkii ku howlanaa sameyntiisa. Waxyaabaha la soo qabtay waxaa mid ah xashiishad iyo fuustooyin lagu karinayay qamriga macmalka ah ee loo yaqaan calaqda iyo qaar kale oo lagu keydin jiray.
Guddoomiyaha degmada Kaxda Maxamed Ismaaciil C/llaahi ayaa sheegay in howlgalkaas lagu soo qabtay 6 fuusto oo waaweyn iyo shan nin oo la sheegay inay sameynayeen Waxyaabaha maanka dooriya iyo gaarigii lagu qaadi jiray waxyaabahaa.
Waxaa uu intaas ku daray in raggan ku howlanaa sameynta waxyaabaha maanka dooriya ay soo taagi doonaan Maxkamad, isagoo ciidamada amaanka ku amaanay howsha ay qabteen, wuxuuna ku booriyey iney halkooda ka sii wadaan dedaalkooda.
Muqdisho:-Maxkamada Ciidanka Soomaaliya Oo Go,aan Ka Gaadhay Askari Lagu Eedeyaya Inuu Dil Gaystay
21/06/2018 - 08:16:37
Muqdisho Daawo "Hawada Soomaailya Muqdisho Ayaa Loo Soo Raray Oo Laga Xukumi Doonaa" Wasiirka Duulista Somalia
19/06/2018 - 17:12:32
MUQDISHO- SHACABKA MUQDISHO OO SIDA FIINTA UGA QAYLIYEY HESHIISKII SOMALIA IYO ITOOBIYA
17/06/2018 - 16:28:00
War Deg Deg Ah: Ra'isul Wasaaraha Itoobiya AbiI Ahmed Oo Muqdisho Goordhawayd Soo Gaaray
16/06/2018 - 10:13:48